Izinhlelo Ezinamandla Zokungena Iwebhusayithi Yebhizinisi Lakho Ngokusho Kwe-Semalt
Kungakhathaliseki ukuthi kufanele usebenzise idatha yebhizinisi lakho, ucwaningo noma umsebenzi, akukho okubi kakhulu kunokulinda amakhasi ukulayisha ku-Netscape Navigator noma i-Internet Explorer. Ngenkathi usebenzisa i-intanethi, ungase ubhekane nenkinga yokuxhumeka okuncane futhi ungase ulahlekelwe iningi lwedatha oyidingayo. Uma ubheka iwebhusayithi enzima noma ibhulogi ngezinkulungwane zamakhasi, kuzodingeka uchofoze imouse yakho izikhathi eziningi ukuze uthole lawo makhasi avulwe kahle. Siyabonga ukuthi izinhlelo ezikhethekile ze-extractor web yenza kube lula kuwe ukulayisha amasayithi wakho owathandayo ngaphandle kwenkinga. I-extractor yewebhu empeleni uhlelo oluthile olusiza abacwaningi, izintatheli, abafundi, abomabhizinisi, nabathengisi ukuthi bakhiphe idatha ngokushelelayo futhi babuke amakhasi ahlukene ewebhu ngejubane eliphezulu. Amanye amathuluzi athembekile kakhulu achazwe lapha - master certified machinery and equipment appraiser.
1. Ukufakela okufakiwe:
Ukusinda kwi-Oftline kungenye ye-extractors ye-web best and edume kakhulu kwi-intanethi. Ngalesi thuluzi, unganquma ukuthi zingaki izinto ongathanda ukuzilanda, futhi akukho mkhawulo kunani lamakhasi okufanele akhiphe. Futhi, awudingi i-FTP kuwebhusayithi yakho ukulanda idatha. Leli thuluzi lihambisana neWindows, Vista, XP nezinye izinhlelo zokusebenza ezifanayo.
Ngenye yezinhlelo ze-web extraction epholile kakhulu futhi eyaziwa kakhulu. I-eXtractor yeWebhusayithi inhle kubo bobabili abahleli nabangewona uhlelo futhi yenza ucwaningo lwakho lwe-inthanethi lube lula futhi lube lula. Ungalanda yonke iwebhusayithi noma izingxenye zayo usebenzisa leli thuluzi elinamandla..Kuyaziwa nge-interface yayo yomsebenzisi-friendly futhi iphaneli yokulawula esisiza ukuthi uhlele futhi uhlele noma iyiphi idatha ngendlela engcono. Iwebhusayithi eXtractor iyahambisana nazo zonke izinguqulo ze-Windows namadivayisi e-iPhone.
I-Sitesucker yinqubo enkulu yama-Mac esiza ukulanda iwebhusayithi futhi iletha izinguquko ekuxhumaneni kwakho kwe-intanethi. Ikwazi ukukopisha kalula amakhasi, izithombe, isitayela namaphepha e-Google okufunayo kwi-hard drive yakho yokusetshenziswa okungaxhunyiwe ku-intanethi. Udinga nje ukufaka i-URL ku-SiteSucker isikhombimsebenzisi, futhi izolanda ngokuzenzakalelayo idatha oyifunayo. Lolu hlelo ludinga i-Mac OS X 10.11 futhi lungalandwa kuwebhusayithi yeSayithiSucker.
4. Ukubamba isayithi:
Ukubamba-indawo kuyisinye sezinsimbi ezinamandla kunazo zonke . Isebenza kokubili ungaxhunywanga ku-intanethi futhi ku-intanethi futhi ingadala amakhophi we-website izikhathi eziningi, kanye namafayela ayo asekelayo afana nehluzo, amakhasi, amafayela omsindo namavidiyo. Leli thuluzi lingathatha futhi amafayela kusuka kumasayithi ahlukene ngesikhathi esifanayo, ugcine isikhathi esiningi namandla. Ihambisana ne-ASP, PHP, i-Cold Fusion ne-JR yezilimi futhi ungayibuyisela kuyi-HTML ecacile. Lolu hlelo lwamahhala lusebenza ku-Windows 7, Vista, XP, Windows Me, ne-Win98.
Isiphequluli sakamuva se-Blue Squirrel sabizwa ngokuthi i-WebWhacker 5. Kungakopisha isayithi lonke kwi-hard disk yakho kubasebenzisi abangaxhunyiwe ku-intanethi futhi isebenza njengokuqeqeshwa indawo yabafundisi nabafundi. Kulula ukusetha futhi uhlolisise idatha yakho njalo ngekhwalithi, ihlele futhi uyibuyekeze ngokuvumelana nezidingo zakho. Ngaphezu kwalokho, i-WebWhacker ingaphinde iphindwe kabusha izakhiwo zomhlahlandlela wesayithi lakho futhi ihambisana ne-Vista, i-XP ne-Windows 7.